नागरिक प्रशासन निरीह - Jhilko
नागरिक प्रशासन निरीह
३ भदौ,२०७६ 302 0
‘रवि लामिछानेलाई फसाउन खोजिदैंछ’, ‘प्रतिशोध साँधिदैंछ’ भनेर सडकमा आवाज उठिरहेको बेलामा प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल हिरासतमा राखिएका लामिछानेलाई चितवन पुगेर भेटेको घटनाले नागरिक प्रशासनको निरिहता देखिएको छ । जनपदका प्रहरी प्रमुख नै हिरासत चाहारेर हिँडछन भने नागरिक प्रशासनको नेतृत्व निरिह रहेको कुरा यहीँबाट बुझ्न सकिन्छ । नागरिक प्रशासनको निरिहतामा चितवन अशान्त हुन पुगेको हो । प्रहरी ऐन २०१२ अनुसार देशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रत्यक्ष नेतृत्व हुनुपर्नेमा कतै देखिँदैन । सडकमा उठेको आँधीबेहरी यसैको उपज हो । यसरी एउटा सामान्य घटनामा कफ्र्यु आदेशसम्म गर्नु प¥यो ।
नागरिक प्रशासनको नेतृत्वको अभावमा यतिखेर पुडासैनी प्रकरणमा प्रहरीमाथि प्रश्न तेर्सिएको छ । यी प्रश्नहरुको यथार्थपरक उत्तर नआएसम्म यो प्रकरणको आगो निभ्ने संकेतसम्म देखिन्न । चितवन जिलाका प्रहरी प्रमुख बरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर मल्लसहित सिंगो प्रहरी संगठन प्रश्नको घेरावन्दीमा छ ।
पहिलो प्रश्न प्रहरीले बरामद गरेको आत्महत्या गरेका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मोबाइलमा रहेको भिडियो कसरी वाहिर आयो ? त्यसलाई सम्पादन गरेर रविलाई फसाउने गरी वाहिर ल्याउने कार्यमा चितवनका प्रहरी प्रमुख मल्ल र आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल मतियार बनेको आरोप लागिरहेको छ । यसको सत्यतथ्य सार्वजनिक नभएसम्म यो मसला सडकलाई उत्तेजित बनाउने तुरुप भइरहेने छ ।
दोस्रो प्रश्न हो, लामिछानेलाई न्युज २४ को कार्यालय हाताभित्र हठात प्रहरी पसेर गिरफ्तार किन गरियो ? जनसमुदायलाई उत्तेजित बनाउने यो दोस्रो सूत्र हो । अनुसन्धानका लागि उनलाई प्रहरी कार्यालयमा बोलाउन सकिन्थ्यो । अटेर गरेको या नमानेको भए या उनी दोषी ठहरिएको भए कडा कदम अपनाउन पनि सकिन्थ्यो भन्ने धेरैको राय छ । यसरी प्रहरीले एकपछि अर्को गल्ती यसरी गर्दै गयो जसबाट उसले नागरिक प्रशासनको सहयोग पाउनै सकेन ।
हिरासत भेटघाटको सन्देश
सडकलाई उत्तेजित बनाउने काममा सहयोगी भूमिका प्रहरी प्रमुखकै काम गराईबाट पनि हुन गयो । संगीन मामिलामा अभियोग लागे जसरी रातविरात पक्राउ गर्ने र त्यसको केही दिनमै तिनै अभियुक्तलाई भेट्ने खनालको दोहोरो मापदण्डले यो मामला उत्तेजित बनाउने कामलाई मद्धत ग¥यो । अभियोग लागेका व्यक्तिलाई हिरासतमा भेटेको यो पहिलो घटना भएको छ । प्रहरी ऐनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर भेटघाट गर्नु नै जङ्गी प्रशासनको नालायकी हो ।
प्रहरीका बारेमा उठेका प्रश्नको जवाफ नदिई प्रहरी प्रमुखले हिरासतमा रहेका पत्रकार लामिछानेलाई भेट्नुले मुख्यतः दुई वटा सन्देश दिन्छ । पहिलो, उनी जुलुश, भिडबाट छिट्टै प्रभावित हुन्छन । प्रहरी संयन्त्रलाई स्वतन्त्र रुपमा परिचालन गरेर परिणाम निकाल्न सक्तैनन् ।
दोस्रो, रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्नमा चितवन जिल्लाका प्रमुख दानबहादुर मल्ल नै मुख्य दोषी हुन, लामो समय पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको सुरक्षार्थ खटिएकाले उनका अगाडि आफू निरिह रहेको व्यावहारिक रुपमा देखाउने । उनको यो व्यवहारले अध्यक्ष प्रचण्ड र सरकारका बारेमा अनावश्यक भ्रम सिर्जना गराउन थप बल ग¥यो ।
चितवन प्रमुख दानबहादुर मल्लका बारेमा मुख्यतः दुइटा आरोप लाग्ने गरेको छ । पहिलो, अध्यक्ष प्रचण्डको सुरक्षामा लामो समय खटिएको र अहिले अध्यक्षको गृहजिल्ला चितवनमा पुगेकाले अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रचण्डकी छोरी, भरतपुर महानगरपालिका मेयर रेणु दाहालको गुरुयोजनामा नै दानबहादुरले रविलाई प्रतिशोध साँध्न लगाए । रविले बेलाबेलामा आफ्नो कार्यक्रममार्फत् अध्यक्ष प्रचण्डका बारेमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने गरेको र रेणु दाहालको सार्वजनिक रुपमा नै प्रतिवाद हुने गरेको घटना यसअघि नै सार्वजनिक भएको हो । प्रहरी प्रशासनको नालायक कदमले अध्यक्ष प्रचण्ड र मेयर दाहाललाई घटनामा तान्नु विडम्बनापूर्ण हो ।
दोस्रो, प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ र काउन्सिलका कतिपय सदस्यसँग दानबहादुरको विशेष सम्बन्ध रहेको चर्चा हो । दानबहादुरमार्फत भिडियो लिएर वाहिर रविका विरुद्ध माहौल बनाउन लगाएर पक्राउ गरिएको घटना विवरणले नै प्रस्ट पार्छ । रवि लामिछाने र किशोर श्रेष्ठका बीचमा लामो दुश्मनीपूर्ण सम्बन्ध भएको र भिडियो उनैमार्फत् वाहिर आएकाले रविका फ्यानहरु दानबहादुरप्रति बढी उत्तेजित छन् । होटेलको कोठामा चुकुल लगाएर आत्महत्या गरेको पत्रकार पुडासैनीको मोबाइलको भिडियो किशोर श्रेष्ठकोमा पुग्नुमा दानबहादुरमाथि तेर्सिएको प्रश्न हो । यो प्रश्नको जवाफ नआएसम्म प्रचण्डलाई तेजोवध गर्न यिनै पात्रहरु लागि परेको हो भन्ने नै अर्थ लाग्छ । यो घटनाको पटाक्षेप हुनमात्र बाँकी छ, त्यसपछि भने यी पात्रहरुको होसहवास उड्ने छ ।
प्रहरी प्रमुख नै गैरजिम्मेवार
प्रहरी प्रमुखले चितवनका प्रहरी प्रम्ुख हुँदै सिङ्गो संगठनका बारेमा उठेका मुख्य दुई प्रश्नको सम्वोधन गरेको भए हिरासतमा राखिएका रविलाई भेट्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । पहिलो, समाचार कक्षमा गएर हठात रवि लामिछानेलाई किन गिरफ्तार गरियो ? दोस्रो, प्रहरीको हातमा रहेको भिडियो वाहिर कसरी आयो ?
आईजीपीका बारेमा मुख्यतः दुई वटा प्रश्न खडा छन् । पहिलो, उनी एकदमै रक्षात्मक अवस्थामा रहेका प्रहरी प्रमुख हुन । भीड र आफ्नै मातहतका प्रहरी अधिकृतबाट समेत धेरै डराएर काम गर्छन ।
दोस्रो, उनले परिस्थिति गिजोलिए पनि, सरकारलाई अप्ठ्यारो परे पनि के फरक पर्छ र ? भन्ने सोंचका साथ काम गरेका छन् । यस्तो प्रहरी नेतृत्व नसुध्रेसम्म पुडासैनी प्रकरण दोहोरिरहनेछ । मुलिकी संहिताको यो व्यवस्था पूर्वाग्रह साँध्ने, फसाउने तुरुप बनिरहनेछ । यो नागरिक प्रशासन सेबोटेज गर्ने हतियार बनिरहने छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
जी सेभनको शिखर सम्मेलनका सर्वाधिक चर्चामा रहेको फोटो
सुनको भाउ घट्यो, प्रति तोला ७२ हजार ६ सय रुपैयाँ
राष्ट्रपति भण्डारी चीन प्रस्थान, को को छन् साथमा ?
४ बैशाख,२०७६0231
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज चीन प्रस्थान गरेकी छिन् । चिनियाँ समकक्षी सी जिनपीङको...
७ असार,२०७६0133
बाढी­पहिरोको विपद : राहत र उद्धारलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय
७ असार,२०७६0481
सरकारको विपद् व्यवस्थापन केन्द्रीय कार्यकारी समितिको बैठकले राहत तथा उद्धार कार्यलाई...
१ असार,२०७६0529